ကြှနျုပျတို့အကွောငျး - ထာဝရချစ်ကြည်ရေး Ptfe တိပ် Co. , Ltd မှ
Jinhua ထာဝရချစ်ကြည်ရေး Ptfe တိပ် Co. , Ltd မှ ကျနော်တို့ Langya မြို့, Jinhua စီးတီး, Zhejiang ခရိုင်မှာတည်ရှိပါတယ်, Jun.2014 အတွက် estabilished ။ YiWu မှစ. ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့သာ Drive ကို Car.We PTFE တိပ်, Ptfe Thread တံဆိပျကိုတိပ်ခွေ, အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်တိပ်, ဓါတ်ငွေ့တိပ်, အဝါရောင် Ptfe တိပ်, ပန်းရောင် Ptfe တိပ်ထုတ်လုပ် 45 မိနစ်လိုအပ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ဧရိယာတည်ဆောက်ခြင်းထက်ပိုမို 2000 စတုရန်းမီတာရှိသည် ဖြစ်. , ကျော် 70 တည်ဆဲဝန်ထမ်း, နှစ်စဉ်ရောင်းအားထက်ပို 90% တင်ပို့သည်သန်း 30 ယွမ်အထိရောက်ရှိခဲ့သည် ..
အဆိုပါအပေါများနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိနှင့်အဆုံးမဲ့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဝိညာဉျကိုအပေါ် Besed, လုံးဝယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများ Jinhua ထာဝရချစ်ကြည်ရေး Ptfe တိပ် Co. , Ltd မှနိုင်ငံခြားစျေးကွက်များတွင်အကောင်းတစ်ဦးဂုဏ်သတင်းရှိစေလော့။ PTFE ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးတို့ကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် operating အတွက်
ကြွယ်ဝသောအတွေ့အကြုံရှိသည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအီဂျစ်, အီရန်, တူရကီ, အိန္ဒိယ, လက်ဘနွန်, တောင်အာဖရိက, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ရုရှား, ပြင်သစ်, အီတလီ, ဗြိတိန်, အမေရိကန်, စင်ကာပူ, ဆော်ဒီအာရေဗျ, အီရတ်တင်ပို့ကြပါပြီ, နိုင်ငံခြားစျေးကွက်များတွင်ကြီးမားသောရှယ်ယာယူထားသော , ဆီးရီးယား, ခကျြသမ်မတနိုငျငံ, ဂါနာ, ဘရာဇီး, အာဂျင်တီးနား, ကိုလံဘီယာ, မက္ကစီကို, ထောက်လှမ်းရေး, သြစတြေးလျ, အင်ဒိုနီးရှား, ဂျပန်, တောင်ကိုရီးယား, တိုင်ဝမ်နှင့်အခြားနိုင်ငံများတွင်တစ်ချိန်တည်းမှာ, ကုမ္ပဏီတက်ကြွစွာပြည်တွင်းစျေးကွက်စူးစမ်း, အထွေထွေအနိုင်ရရှိလိုက်ပြီ ဖောက်သည်ယုံကြည်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုကို။
"ပထမဦးဆုံးဖောက်သည်, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိသောနှင့် win-win" အချိန်ကြာမြင့်စွာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များ, ခက်အလုပ်လုပ်, နည်းပညာအသစ်များ၏ R & D တိုးမြှင့်, တင်းကျပ်သောစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူအညီကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတိုးတက်အောင်စောင့်ရှောက်တဲ့အခြေခံအကျဆုံး, အရည်အသွေးအဖြစ်စျေးကွက်-oriented, အခွက်တဆယ်လိုက်နာ ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ cooperat အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာရှေ့ဆက်အားလုံးဖောက်သည်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာနာမည်ကျော် brands.Look စေနဲ့ပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံး criterion.Try အဖြစ်။